Phakistan - ALinks
Kubiza malini ukuya ePakistan?
January 10, 2022 UAntika Kumari Phakistan, hamba
EPakistan, kubiza malini ukuya kubhaka? Zonke iimpendulo uya kuzifumana ngale ngxelo yohlahlo lwabiwo-mali. Ukuqhekeka kwesixeko ngesixeko, umyinge weendleko zenkcitho eqhelekileyo, kunye neengcebiso ngendawo yokuhlala zibandakanyiwe. Ngaphakathi ePakistan, njani
January 9, 2022 UAntika Kumari yibakhona, Phakistan
Ezothutho ePakistan zinkulu kwaye zahlukile, kodwa isekwinqanaba lokuphuhliswa kwayo. Inceda abantu abangaphezulu kwezigidi ezingama-200. Inethiwekhi yothutho ePakistan ineendlela, oololiwe, amazibuko, ukuhanjiswa koluntu kunye neenkonzo zokuhambisa. Phantse
Ungasifaka njani isicelo se-visa ukuya ePakistan?
January 4, 2022 UMaitri Jha Phakistan, ivisa
IPakistan isenokungabi yindawo kuluhlu lwakho lokuhamba. Ngenxa yemicimbi yokhuseleko kwiindwendwe kunye nabahlali. Le miba yenze ukuba abantu baseMelika bangakwazi ukuya ePakistan. Kodwa, ukuthintela abakhenkethi abaninzi abanomdla ukuba bahambe. Bamele bazive
IVisa yaseTshayina ePakistan
Oktobha 20, 2020 UAntika Kumari iTshayina, Phakistan, hamba
Abanini bamapasipoti abanobuchule basePakistan ababandakanywa kwii-visa. Kwaye inokuhlala ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-30 kwilizwekazi lase-China ukuya kuthi ga kwiintsuku ezili-14 e-China yase-Hong Kong SAR nase-Macao SAR. Abaphethe ipasipoti ngokusemthethweni ePakistan abafakwanga kwii-visa.
Imisebenzi ye-Pak, Umsebenzi kunye neNgqesho ePakistan.
Ngamana 4, 2020 UKaruna Chandna imisebenzi, Phakistan
UKUSEBENZA NOKUPHILAZA NGOKUPHAKATHI PAKISTAN NESIKHOKELO SEZIPHAKAMISO ZANGAPHAKATHI Ngaba ulungiselela ukuhlala nokusebenza ePakistan? Okanye sowuyi-ex-pat kwaye usanda kufudukela e-Islamabad, Karachi okanye kwesinye isixeko sasePakistan samanye amazwe? Fumana umsebenzi
Ihotele yexabiso eliphantsi kunye nePakistan
Disemba 5, 2019 UMaitri Jha iihotele, Phakistan
Jonga kwaye ufumane iihotele ePakistan Unqamlezo lwakudala phakathi kwe-Middle East kunye ne-Asia Ephakathi, iPakistan ibiyikhaya kubantu abaninzi neenkcubeko ukutyhubela iinkulungwane. Yintoni eseleyo lelinye lawona mazwe anomdla kakhulu eAsia, ubukhulu becala
Ukhathalelo lwempilo ePakistan
Disemba 4, 2019 UMaitri Jha Phakistan
INkqubo yokuZiswa koNonophelo lwezeMpilo (i-HCDS) lungiselelo elisebenza kakhulu kubo bonke abantu belizwe ngokusebenza ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo, ukusasazwa kwezixhobo ngokufanelekileyo, kunye nengxowa mali yolwakhiwo olulungiselelwe kakuhle. Kumhlaba jikelele, i-HCDS iba yinkonzo ekhuphisanayo nenokukhula ngokukhawuleza
Indawo ezigqibelele ePakistan
Disemba 4, 2019 UKaruna Chandna Phakistan
Ukuthenga yeyona nto iyonwabisa kakhulu kwaye kwenza ukuba abafazi bonwabe kwaye kuyadaleka ukuba kuphela ngabafazi abathanda ukuthenga. Ukuba kubonelelwe ngendawo yokuthenga, amadoda atyekele kakhulu ekuthengeni. Kwiminyaka nje embalwa emva, iPakistan yayinjalo
Disemba 3, 2019 UKaruna Chandna Phakistan
Amagqabantshintshi eBhanki ePakistan I-State Bank yasePakistan (SBP) yeyona bhanki iphambili yelizwe. Yabandakanywa phantsi kwe-State Bank of Pakistan Act, 1956. Ibhanki esembindini inoxanduva lokulawula amatyala nokuqinisekisa ukuba ilizwe liphile